Izithelo ezingavamile | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izithelo ezingavamile
Izithelo ze-Guava izithelo ezizuzisayo, ikhalori, indlela yokudla
Umuntu ongakaze azame i-guava, uyomangala ukwamukela isitatimende ukuthi lesi sithelo "uyinkosi yezithelo". Ake siwubheke futhi sithole ukuthi izithelo ze-guava zingobani nokuthi yiziphi izici abantu abathanda lesi sitshalo. Ikholori kanye nenani lomsoco. I-Gua ibukeka ngaphandle ngaphandle okungaqondakali: ngesimo isithelo sibonakala njenge-apula noma iphakathi kwe, eluhlaza noma ephuzi, egcwele ama-tubercles.
Iyini ukusetshenziswa kwe-feijoa yomzimba wesifazane?
Eminyakeni engamashumi amathathu edlule, izithelo ezishisayo zazibhekwa njengomkhiqizo omncane. Ukuhlukahluka kwamanje emakethe nasezimakethe kuzojabulisa ngisho nomthengi odinga. Ukuze uthole inzuzo enkulu kule mikhiqizo, udinga ukwazi ukuyikhetha futhi wazi izindawo ezithile zesithelo ngasinye. Kulesi sihloko sizobheka izithelo ze-feijoa ezishisayo - ukudla okunomsoco, izakhiwo zokuzithokozisa nezokudla, kanye nezokupheka.